Savorovoro mitranga etsy sy eroa Hampihena ny isam-baton’ny IRD…
Sivy volana nitondrana ny firenena izay ny filoha Andry Rajoelina sy ny ekipany. Maro ny vava sy ny fampanantenana mbola nitosaka tao anatin’izany.
Fitantanana ny firenena Miha mitoka-monina Rajoelina
Raha atao ny asa marika tsotsotra dia miiba ny asa vitan’ny fitondram-panjakana nahazo fahefana ny janoary 2019 hatreto aloha. Olana no betsaka, mitarazoka ny fipoiran’ny vahaolana fa tsy arakarak’ilay hoe mandeha haingana be na “ TGV”.
Mihary Andriantsilavo Vonona hampandroso an’Ambohidrapeto
Vonona hitondra fampandrosoana sy ainga vao ho an’Ambohidrapeto, distrikan’Antananarivo Atsimondrano Atoa Andriantsilavo Mihary,
Tsena moran’ny fanjakana Miharihary ny fanaovana propagandy
Mifanandrify tanteraka amin’ny vanim-potoanan’ny fifidianana ny tsena mora tanterahin’ny fanjakana amin’izao fotoana.
Antananarivo no ivon’ny politika eto, hoy izy. Ny dikan’izay dia matanjaka kokoa sy mafimafy io. mila rivo-baovao, hevitra tsara sy matotra hitondrana an’Antananarivo. Mila miasa mafy amin’ny fanentanana ny mpifidy satria hiaraha-nahita ny fihenan’izany nanomboka tamin’ny fifidianana solombavambahoaka. Mila hatsaraina ny fomba fiasa atao satria niaraha-nahita fa nisy foana ny fitarainana sy fimenomenomana teo amin’ny fikarakarana. Antso avo amin’ny CENI io, hoy izy, ary izahay dia hanara-maso ny fandehan’ny fifidianana. Mipetraka foana ho anay ny ahiahy ary efa mametraka ny paikady rehetra hiadiana amin’ny halabato ary antony hanentanana ny vahoaka. Mikasika ny tsy fahazoan’ny sarambabem-bahoaka ny tena asan’ny mpanolontsain’ny tanàna kosa dia nohazavainy fa araka ny lalàna 2014 – 020 dia isan’ny asan’ny mpanolontsaina ny manapaka ny tetibolan’ny kaominina sy ny hevi-dehibe rehetra entina hampandrosoana ny tanàna. Ohatra amin’izany ny resaka fivarotana tany, fananganana tsena, fananganana foto-drafitrasa. Toy izany koa ny findramam-bola entina miasa dia ny mpanolontsain’ny tanàna no manapaka azy.